Kedu ihe kpatara akwụkwọ mpempe akwụkwọ ji aga n'ihu na-eti akwụkwọ dijitalụ site na mbuba? | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Kedu ihe kpatara akwụkwọ mpempe akwụkwọ ji aga n'ihu na-eti akwụkwọ dijitalụ site na ọdịda oke?
N'etiti afọ dijitalụ, akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-aga n'ihu na-abụ ọkacha mmasị nke ndị na-agụ afọ niile.
Mgbe anyị bụ ndị tolitere na-agụ Mortadelo na Filemón na akwụkwọ na anyị nwere mmasị n'ịgụ na usoro kpochapụwo na ahụmịhe ọ bụla ọzọ anyị efuola, ndị mmadụ ga-eju n’ụwa onye tolitere na YouTube na ha gụrụ akwụkwọ dijitalụ n’elu mbadamba nkume ha.
Ọ bụ ezie na ọ ka nwere ọtụtụ iri afọ ka nke ahụ mee, o yighị ka ọ ga-abụ, mgbe ahụ, a ga-eji akwụkwọ mpempe akwụkwọ kpọrọ ihe karịa nke ahụ dị ka ihe onye nchịkọta. Isi na mmetụta nke akwụkwọ, ihe na-enye obi ụtọ ma dị ntakịrị nke na-eme mgbe ị na-atụgharị peeji, ga-efu uru n'ihu uru nke ibu dị ala, ikike nchekwa na njikọta nke mgbasa ozi dijitalụ na-enyere aka.
1 Mgbanwe nwayọ nwayọ site na akwụkwọ akwụkwọ gaa akwụkwọ dijitalụ. Gini mere anyi ji iguzogide ebook?
2 Otu ngwaọrụ ga-abụ ihe mkpalite maka mgbanwe mgbanwe.
3 Otu ngwaọrụ ma ọ bụ ...
Mgbanwe nwayọ nwayọ site na akwụkwọ akwụkwọ gaa akwụkwọ dijitalụ. Gini mere anyi ji iguzogide ebook?
Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịhụworị na ụzọ ụgbọ oloko ma ọ bụ na ndị nnọchi bọs nke ọgbọ Mortadelos na-agụ ihe omumu akwukwo ohuru ohuru su mobile, eziokwu bụ na, ọgbọ ọ bụla ị bụ, ahụ erughị ala ma ọ bụrụ na anya adịghị eso gị, ọ na-aghọ ọrụ na-agaghị ekwe omume. N'ime ụgbọ njem ọha, ndị na-agụ akwụkwọ akụkọ ahụ na ndị na-agụ akwụkwọ ozi ha na ndị na-agụ akwụkwọ na-ele WhatsApp ma ọ bụ netwọkụ mmekọrịta na ekwentị ha.
Uru dị ugbu a nke akwụkwọ dijitalụ bụ ikike nchekwa ya.
Nke a na-eme ka ị na- ezigbo ezumike enyi maka ndị na - agụ akwụkwọ na - enweghị mmasị iburu akpa akwa jupụtara na akwụkwọ dị arọ. Kama, maka ọgụgụ ubochi, mgbe ị lakpuo ụra, ịga ọrụ ma ọ bụ n'ụlọ n'ụlọ n'oge ngwụsị izu, uru ahụ na-apụ n'anya, n'ihi na ọ dịghị onye na-agụkarị ihe karịrị otu akwụkwọ n’otu oge. Hapụ ihe ụtọ nke akwụkwọ anaghị ewepụ site na ikike nchekwa.
Akwụkwọ mpempe akwụkwọ ahụ na-agwụ ike, ọ nweghị ntụgharị uche na ibe ya ma batrị na batrị.
Nchọpụta kachasị ọhụrụ na-anwa imepụta mgbawa nke nwere ike itinye ọdịnaya nke ọtụtụ nde akwụkwọ na ụbụrụ.
Otu ngwaọrụ ga-abụ ihe mkpalite maka mgbanwe mgbanwe.
Ebumnuche nke ụlọ ọrụ teknụzụ na-etinye uche na ngwaọrụ niile anyị na-eji n'otu (mobile, Tablet, laptop, etc.). N'etiti iburu ekwentị mkpanaaka na akwụkwọ mpempe akwụkwọ ma ọ bụ ekwentị na ebook, ọdịiche ezughi ezu maka ndị hụrụ akwụkwọ n'anya ịjụ ya.
Getga ngwaọrụ pụrụ iche ihe abụọ dị mkpa: Gbanwee nha ya na ojiji ọ bụla ma nwee batrị na-adịte aka.
Mgbe anyị nwere ngwaọrụ nwere ike inwe hà nke a mobile o nwere ike igosipụta nseta ihuenyo gị ruo oke nke telivishọn ma anyị ekwesịghị ịdabere na chaja obere oge ole na ole eji, anyị ga-agụ, lelee ihe nkiri, kwuo okwu, kpọọ ma soro ya na-agagharị.
Ọ bụrụ na anyị agbakwunye na ngwaọrụ ndị a eziokwu mebere, mgbe ike gwụrụ anyị ịgụ akwụkwọ, anyị nwere ike ịga na ụzọ ụgbọ oloko mgbe ị na-eleta MoMA na New York.
Ogologo ọrụ agaghịzi adị mkpa, anyị ga na-atụ anya ịbịa n’azụ oge.
Otu ngwaọrụ ma ọ bụ ...
Uzo ozo banyere udiri ihe ohuru a, nke dika ndi okacha amara na-enye ezigbo ihe omuma na nke ejiri me ha akpa ule bụ mgbawa na ụbụrụ, ma ruo oge ụfọdụ mmadụ na-ahụta ya dị ka obere mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Digital ụwa » Kedu ihe kpatara akwụkwọ mpempe akwụkwọ ji aga n'ihu na-eti akwụkwọ dijitalụ site na ọdịda oke?
Enweela m onye na-agụ kọmputa ruo ọtụtụ afọ ma jiri ya gụọ akwụkwọ akụkọ: ọ bụ ụdị edemede ederede nke a ga-agụ n'ụdị ngwaọrụ a na-enweghị nsogbu ọ bụla ma nwee ike ịnwe akwụkwọ akụkọ niile ịchọrọ. gbanwee ọgụgụ ka ịchọrọ. Mana enwere m akwụkwọ edemede edemede niile na mpempe akwụkwọ n'ihi na ọ dịịrị m mfe idozi echiche site na ịlaghachi na mpempe akwụkwọ na-egosipụta echiche ma ọ bụ idetu ihe ederede n'akụkụ - nke enwetabeghị site na akwụkwọ ntanetị. N'aka nke ọzọ, akwụkwọ edemede bụ akwụkwọ ndị bara uru ịgụ ọtụtụ oge na ọ bụ enyemaka na-enweghị atụ ịchọta ịchọta nkọwa ndị ahụ n'akụkụ dị n'akụkụ iji kọwaa ma ọ bụ chegharịa ihe onye edemede ahụ chọrọ ikwu.
Obi dị m ụtọ, dị ka onye na-agụ mbadamba nkume, na akwụkwọ ndị e biri ebi na-adọrọ adọrọ mmasị ịgụ. Onye ọ bụla nke na-eme njem site na njem ọha na eze ma ọ bụ nke ehighị ụra nke ọma ma na-enwe obi ụtọ site n'ịgụ ihe eletrọniki dị mma. Onye hụrụ ụlọ ahịa akwụkwọ na ịtụle akụkọ anya, ịjụ ajụjụ banyere akwụkwọ n'ozuzu ya, ọnọdụ pụrụ iche emetụla m, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbanwe uche n'ihi na anaghịzi m aga n'ihu n'ọbá akwụkwọ m, kama emekwuru m ya na kọmputa. Achọpụtara m na ọ bụ ihe na-awụ akpata oyi n’arụ ụka banyere ihe ma ọ bụ ihe ka mma, ọ ka mma m ịnwale ile onwe m anya n’oge m, ebe m na-enwe nnukwu mkpachapụ anya na netwọkụ mmekọrịta n’agbanyeghi na m nwere Facebook na Twitter, ọ na-enye m nsogbu ịmara ebe ọgụgụ dị na-aga. Mgbawa n'ime ụbụrụ iji gụọ, ma ọ bụ ngosipụta ọ bụla ọzọ nke ọhụụ, echere m, ga-abụ ahụmịhe na-ejikwa pụọ ​​na nsogbu ahụ na ọkwa ụwa - ọkachasị ọgbọ - nke agụpụtara agụ. Ọ bụ ihe ịma aka na-atụ aka n'ọdịnihu nke dị ụnyaahụ!
Zaghachi Alejandro Palma Zenteno
Ana Lena Rivera. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Ihe ndị nwụrụ anwụ na-agbachi nkịtị